Alahady 25 Aprily 2021 – FJKM
Boky iray ao amin’ny Baiboly ny Ohabolana, tafiditra ao anatin’ny fizarana fahatelo izay atao hoe : Bokin’ny fahendrena sy Tononkalo. Manana ny mampiavaka azy ny boky, ary mitondra fahendrena sy fahamendreham-pitondran-tena. Anisan’ny mora raisina indrindra ao amin’ny Testamenta Taloha ny bokin’ny Ohabolana, satria mahasahana ny lafin-javatra maro samihafa eo amin’ny fifandraisana ao anatin’ny fiaraha-monina sy ny fitsipi-pitondran-tena amin’ny andavanandro.
Tsy navela handalo fotsiny anefa izany fa mba hiorenan’ny mino ao amin’Andriamanitra, Tompon’ny lanitra izay mampianatra rahateo ho amin’ny fahamendrehana. Ny ataonao dia misy valiny avokoa , fa hoy ny voasoratra : » Ny valin’ny fanetren-tena sy ny fahatahorana an’i Jehovah dia harena, voninahitra, fiainana » (and. 5) . »Tsilo sy fandrika no amin’ny alehan’ny maditra. Fa izay te-hiaro ny ainy dia manalavitra izany ». Tsy ho amin’ny fiainana andavanandro ihany no lazain’ny boky, fa mahasahana ny fianan-ko avy koa, indrindra eo amin’ny taranaka.
Ny fampianarana sy fampiorenana ny lalàna marina eo amin’ny mino dia fanabeazana ho azy, ka hananany fiainana mitohy tsy miova , hiorenany ao amin’ny Tompo.
Ny ohabolana eto no mampahatsiahy antsika fa ny fijoroana amin’ny maha- mpino eo amin’ny sehatra izay misy dia hisehoan’ny Voninahitr’Andriamanitra. Ary ny fanabeazana azo hatramin’ny fahazazana dia lovana mandraka antitra.
Amin’ny maha mpino anao, misy akony eo amin’ny fiainanao ve ny fanabeazana fony fahazazana’?